McDaan Nwere Oke | United Kingdom Franchises | Franchiseek
»Ohere ndi Franchise»McDaan Nwere Oke
McDaan Nwere Oke
McDaan Limited bụ ụlọ ọrụ nzuzo nke edebara aha na iwu na UK. Anyị na-arụ ọrụ kemgbe 2011 na akụkụ nke ego, Consultancy na Infrastructure Project Development. Anyị na-achịkwa FCA na UK na nọmba ikikere 679772. Dị ka akụkụ nke mmemme mmeba anyị, anyị ewepụtala usoro azụmaahịa dị mma nke nwere ohere dị ukwuu maka ndị nwere oké ọchịchọ ịbụ ndị na-arụ ọrụ onwe ha dị ka ndị na-ahụ maka azụmahịa na ego. You ga-arụ ọrụ dịka akụkụ nke otu anyị iji nyere ndị mmadụ aka na azụmaahịa gafere ụdị dị iche iche na ngalaba dị iche iche iji kwalite ego, nyere ha aka ịzụlite azụmaahịa ma nye ha ọrụ nkwado ndị ọzọ dị ka achọrọ.
Ngwongwo ahihia, tinyere ego ndi ahia, ulo, mbinye aka, ikwughachi ego, mbinye ego, mmepe ego, izuta ka ego
Ego a na-akwụnye aka, gụnyere ego ụgbọ, ịzụ ahịa na ịzụta ụlọ, ego iji zụta igwe, itinye ego megide ụgbọ ala, ihe ịchọ mma, nka wdg.
Ego iji zụta ulo leasehold, freehold ma ọ bụ franchise azụmahịa
Azụmaahịa azụmaahịa, nke a na-ekpuchi mgbazinye ego echekwara maka ndị ọchụnta ego ma ọ bụ ndị mmadụ, ha na-agụnye usoro akwụmụgwọ azụmaahịa, nkwalite ego, mgbazinye ego echekwara, mgbazinye mbido, ego azụmaahịa, ezumike nka na-eduzi ego
Ego maka oru ndi okacha amara dika ndi dibia, anya, ulo ogwu, ogwu, ulo, iwu ndi ozo.
Akwụkwọ ọnụahịa ọnụahịa nke gụnyere ọnụahịa na ọnụahịa
Ego maka ụlọ ọrụ onyinye (dịka ụlọ ụka)
Azụmaahịa azụmaahịa tinyere mkpụrụedemede nke Ebe E Si Nweta, Ndabara, Mpụpụ mbupụ, Ego nnweta, Mbubata ego na ihe mkpuchi Ebe E Si Nweta
Inweta ego na ego
Achọrọ m maka azụmaahịa, azụmaahịa ma ọ bụ nkwata okwu?
Ee e, ị naghị, dịka anyị ga - enye gị ọzụzụ niile dị mkpa yana nkwado na - aga n'ihu iji hụ na ị nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma na ụlọ ọrụ a. Àgwà kachasị mkpa anyị na-achọ maka ndị mmadụ nwere ike ịkwụsi ike ọtọ, ịnụ ọkụ n'obi yana njiri arụ ọrụ egosipụtara na ọchịchọ ime nke ọma. Ndị a bụ isi ihe dị mkpa achọrọ iji wee zụlite azụmahịa na-aga nke ọma Ozugbo a zụrụ ha nke ọma, ị ga - enweta ihe ọmụma iji nyere gị aka ịnye ndị ahịa gị usoro kachasị mma, yana nkasi obi nke nkwado ụlọ ọrụ nwere ahụmahụ iji nyere gị aka ịme ọ bụla nke uzo.
Ogologo oge ole ka ọzụzụ ahụ ga-ewe tupu ịmalite ịrụ ọrụ?
A ga-enye gị ọzụzụ azụmaahịa sara mbara iji nweta gị n'ịntanetị na nkasi obi nke ụlọ gị. Ihe ndị a bara uru, na-ahazi usoro na usoro nzọụkwụ site na nkwenye oge na oge ọzọ. Anyị na-ekpuchi usoro azụmaahịa ndị a n'ụzọ zuru ezu iji mee ka ị nwee ike ịzụlite azụmahịa siri ike ma na-eto na ọnụ ala. Site na sistem nke anyị na-ekpuchi, ị ga-enwe ike ịnabata ụfọdụ ma ọ bụ niile nke ngwọta dị ma ọ bụ họrọ ndị ga-adabara gị na ụdị ndụ gị. Na mgbakwunye na ọzụzụ azụmaahịa enyere gị, ị ga-eritekwa uru site na nkwado ahịa anyị na-aga n'ihu ka anyị na-arụ ọrụ gị iji zụlite mkpọsa dị iche iche, dịka na mgbe achọrọ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere ohere a na-enye ọcraụ, pịa n'okpuru iji mee ajụjụ. Anyị ga-eji ozi-e zitere gị ozi ndị ọzọ.